मौद्रिक नीतिमा हानका १० सुझाव : सहुलियत कर्जाको सीमा रू. ५० करोड पुर्‍याउन माग | आर्थिक अभियान
मौद्रिक नीतिमा हानका १० सुझाव : सहुलियत कर्जाको सीमा रू. ५० करोड पुर्‍याउन माग
काठमाडौं । होटल एशोसिएशन नेपाल (हान) ले आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा समेट्न १० बुँदे सुझाव प्रस्तुत गरेको छ ।
सहुलियत कर्जा रू. २० करोडबाट रू. ५० करोड पुर्‍याउनदेखि क्रेडिक कार्डको शुल्क ३ प्रतिशतबाट १ प्रतिशतसम्ममा झार्न हानले सुझाव दिएको छ ।
मंगलवार हानका कार्यवाहक अध्यक्ष विनायक शाह, महासचिव साजन शाक्यलगायत अधिकारीले नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई भेटेर मौद्रिक नीतिका बारेमा सुझाव प्रस्तुत गरेका हुन् । सो अवसरमा शाहले कोभिड–१९ को महामारीबाट पर्यटन क्षेत्र विशेषगरी होटल उद्योग सबैभन्दा बढी प्रभावित भई मुश्किलले सञ्चालनमा रहेको बताए ।
आर्थिक वर्ष २०७९ / ८० को बजेटले पर्यटन तथा होटल उद्योगलाई प्राथमिकता प्राप्त उद्योगको रूपमा सम्बोधन गर्न नसकेको पनि उनले बताए । बजेटले नसमेटेका विषय मौद्रिक नीतिले समेट्नेमा विश्वस्त रहेको उनको भनाइ छ । होटल तथा पर्यटन उद्योगको वित्तीय अवस्था हालसम्म सहज भइनसकेको भन्दै २०८१ असार मसान्तसम्मको हर्जना र पेनाल ब्याज नलाग्ने व्यवस्था गरिनुपर्ने माग हानको छ ।
हाल भएका कर्जाहरूलाई कम्तीमा ३ वर्ष अवधि थप गरी पुनर्तालिकीकरण गर्न पनि सुझाव दिइएको छ । पुनर्तालिकीरण गरिएको कर्जाको ब्याज र साँवा तिर्ने समयसीमा असार मसान्तसम्म भन्दा लामो अवधिका लागि किस्ताबन्दीमा तिर्नेरबुझाउने व्यवस्था गर्न पनि हानले अनुरोध गरेको छ । होटलमार्फत विदेशी एजेन्टहरूलाई डलरमा कमिशन भुक्तानी गर्दा भुक्तानीको सीमा बढाइनुपर्ने पनि माग राखिएको छ ।
यस्तै होटलहरूले तोकेको व्यक्तिको नाममा डलरको प्रिपेड कार्ड उपलब्ध गराउन, भारतीय ५०० र २००० रुपयाको नोटलाई सहज रूपमा स्वीकार गर्न पाउनुपर्ने व्यवस्था गर्न पनि माग गरिएको छ ।